Soo dejisan Exiland Backup Professional 5 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaExiland Backup Professional
Bogga rasmiga ah: Exiland Backup Professional
Swiland Backup Professional – Waa qalab awood badan oo lagu kaydinayo xogta. Software wuxuu taageertaa nooca nadaamka noocyada kala duwan oo si toos ah loogu abuuri karo jadwal ama manfaca codsadaha isticmaalaha. Dib u soo noqoshada xirfadlayda ee Somaliland waxay awood u leedahay in ay abuurto nuqul ka mid ah wadooyinka maxalliga ah iyo dibadda, kombiyuutarada ku xiran shabakada maxalliga ah, FTP ama SSH server iyo kuwa la socda. Nidaamku wuxuu ku burin karaa nuqulka kaydinta ZIP archive halka uu ku hagaajinayo heerarka cadaadiska, wuxuu u kala qaybiyaa xajmiga iyo tirooyinka. Exiland Backup Professional waxay taageertaa kaydinta xogta badan, tirtirto faylalka asalka ah waxayna ku koobneysaa nuqullada kale ee faylasha ama serverka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto faylasha ku jira nuqulka oo dib u soo celiya goobta asalka ah ama diiwaanka cayiman. Batroolka Dib-u-soo-celinta ee Somaliland wuxuu sidoo kale xakameyn karaa culeyska saaran ee processor-ka iyo wuxuu maareynayaa shaqooyinka inta lagu jiro xukunkooda
Bixinta kaydka ilaha gudaha iyo dibedda
Meelaha heerarka cadaadiska
Dib u soo celiyaa faylasha kaydka shaqsiga
Awoodda lagu tirtiro xogta macluumaadka
Soo dejisan Exiland Backup Professional
Faallo ku saabsan Exiland Backup Professional
Exiland Backup Professional Xirfadaha la xiriira